Wadada xariirisa Muqdisho iyo Afgooye oo gabi ahaanba saakay la xiray+Sababta – Hornafrik Media Network
Waxaa saakay la xiray gabi ahaan wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose, sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid ah darawallada gaadiidleyda ee isticmaala wadadaas.
Gaadiidleyda ayaa sheegay inay u wareegeen jid-cade ka baxa dhinaca degmada Dayniile ee gobolka Banaadir.
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya sababta loo xiray wadadaas oo ay dhismo ka wado shirkad laga leeyahay dalka Turkiga.
Sida aan xogta ku heleyno sababta ugu weyn ee gaadiidka kala duwan looga joojiyey isticmaalka wadadaasi ayaa ah arrimo amni, iyadoona la sheegay in dowladdu ay hadda kadib iska xilsaareyso xoojinta sugidda ammaanka Injineerada iyo shaqaalaha ka shaqeynaya dhismaha wadada isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye.
Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in dowladda Soomaaliya ay shirkadda ka dalbatay inay sii wado dhismaha wadadaas oo aysan marna ka niyad jebin, iyadoo loo balan qaaday in la adkey doono amaankooda.
Ciidamadii ugu badnaa oo ka socda booliska gobolka Banaadir ayaa lagu daadiyey wadadaas, waxaana la filayaa in maanta dib loo bilaabo dhismaha wadada, kadib markii shalay halkaas laga soo daabulay qalabkii lagu dhisayey wadadaas.
Sababta shalay qalabka dhismaha looga soo qaaday wadadaas ee loo keenay Muqdisho ayaa lagu sheegay in waxyeelo iyo burbur baaxad leh uu ka soo gaaray qaraxii maalin ka hor ay Al-Shabaab ku weerareen, meel u daw degmada Afgooye oo dhismaha wadadaasi uu marayey.
Sida aan xogta ku helnay shirkadda qaadatay mashruuca ee ku howlan dhismaha wadadaas ayaa saakay qorsheynaysa inay qalab cusub u daabusho goobta uu marayo dhismaha wadada, halkaasna ay howsheeda ka bilaabi doonto, kadib maalin uu hakad ku yimid.
Al-Shabaab ayaa dhankooda kordhiyey weerarada ka dhanka ah dhismaha wadadan, iyadoo marar kala duwan qaraxyo khasaare geystay ku weeraray Injineerada iyo shaqaalaha Turkida ah ee ku howlan dhismaha wadadaas.